6 calaamadood oo lagu garto gabadha aan jaceylka kula wadin | Raganimo University
6 calaamadood oo lagu garto gabadha aan jaceylka kula wadin
February 27, 20194 minutes
Jaceylka halka dhinac ah waa midka ugu xanuunka badan ee soo mara ragga iyo dumarka. In aad gabadh jeclaato oo aad niyada ku hayso habeen iyo maalin balse aysan iyadu dareenka kula wadaagin waa mid xanuun badan. Waxaa laga yaabaa in aad isleedahay waxbay kula wadaa ama dareenkeeda waa isbadali doonaa. Hadaba sidee lagu gartaa gabadha aan qorshaha kula wadin?
Balamaha ayay meermeertaa
Waxaad ku balanteen in aad kulantaan balse marmarsiyo ayay samaysatay. Waxay dhahday waa xanuunsanahay iwm. Waa dhici kartaa in ay run ka tahay balse haddii ay badato in ay balamaha aad dhigataan ay ka baxdo oo ay marmarsiyo joogto ah la timaado taasi waa calaamad in aysan dareenka kula wadaagin. Haddii aad isleedahay dareenka way kula wadaa, u daa in iyada ay balanta qabato. Haddii aysan balan qaban, taasi waa calaamad in aysan waxba kula wadin.
Waxay ku celcelisaa in aad asxaab keliya tihiin
Gabadha aan dooneyn in ay xiriir jaceyl kula yeelato waxay ku celcelisaa in aad asxaab keliya tihiin. Oo xiriirkiina uu yahay mid saaxiibtinimo. Haddii ay ku tiraahdo "waan ku faraxsanahay saaxiibtinimadeena" iwm waxay muujinaysaa in aadan ahayn gacaliyaheeda isla markaana ay aaminsantahay in aadan noqon karin. Haddii aadan dooneyn in aad saaxiib keliya la noqoto, waxaa muhiim ah in aad diyaar u noqoto in aad guud ahaan ka harto.
Jawaabaheedu waa gaabanyihiin
Haddii gabadhu aysan xiiso badan kuu qabin sheekadiina waxay u badantahay in ay kuugu jawaabto hal eray sida OK, Haye, Gartay iwm. Gabadha wiilka dareenka u qabta waxay kaga duwantahay kuwa kale in ay hadal faro badan iyo sheeko dheer ay kula gasho. Haddii aysan telefoonka kaa qaban ama aysan si joogto ah fariin kuugu soo dirin waxay calaamad u tahay rabitaan la'aan. Haddii sidaani dhacdo waxaa haboon in aadan fariimaha iyo wicitaanka ka badan. U daa iyada in ay ku soo wacdo ama fariin kuu soo qorto. Haddii aysan sidaa sameyn waxay u badantahay in aysan dareen kuu qabin.
Balan kuuma qabato
Haddii gabadhu ay xiiso kuu qabto oo ay jeceshahay in ay waqti kula qaadato, waxay u badantahay in ay balan kula dhigato, oo iyadu ay dhahdo aan is aragno. Haddii aysan marnaba balan kula dhigan waxay u badantahay in aysan sidaa kuu qiimeyneyn. Qaasatan, haddii aad adigu qorshe balan u soo bandhigto, oo ay ku tiiraahdo mashquul ayaan ahay balse aysan iyadu soo bandhigin waqti kale oo aad kulmi kartaan, taasi waa calaamad rabitaan la'aan.
Si aan toos ahayn ayay kuugu sheegtay in aysan ku rabin
Dumarka way ku adagtahay in ay si cad u diidaan wiilasha oo waxaa laga yaabaa in iyada oo aan dareen kuu qabin hadana ay kula socoto ama sheekada kula wado. Balse waxaa laga yaabaa in ay si aan toos ahayn kuugu muujiso in aysan xiiso kuu qabin. Waxaa laga yaabaa in ay ku dhahdo "hada diyaar uma ihi xiriir", "Shaqada ama waxbarashada ayaan ku mashquulsanahay." Ogoow in ay kuu sheegayso in aysan dareen kuu qabin.
Si toos ah ayay kuugu sheegtay in aysan ku rabin
Gabdhaha qaarkood warkooda waa cadyahay balse ragga qaarkood ayaa laga yaabaa in aysan Maya u qaadan dhabta oo ay is leeyihiin go'aankeeda waad badali kartaa iwm. Waa arin xanuunbadan in si toos ah diidmo laguu siiyo balse dhinaca kale qofka warkiisa cadyahay ee aan ku meermeerin waa geesi. Haddii gabadhu ay si cad kuugu sheegto in aysan dareen kuu qabin ama aysan dooneyn in ay xiriir kula yeelato, waxaa muhiim ah in aad xushmeyso go'aankeeda iyo in adiga aad xushmeyso naftaada. Ninka raganimada leh waa kan aqbala diidmada isla markaana hore u socda.